Sidina avy any amin'ny Sharm el-Sheikh mankany amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo ao amin'ny AlMasria Universal Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any amin'ny Sharm el-Sheikh mankany amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo ao amin'ny AlMasria Universal Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Egypt • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Nandritra ny volana voalohany taorian'ny niverenan'ny sidina nankany amin'ny toeram-pialantsasatr'i Egypte dia nihoatra ny 20 ny fifamoivoizana mpandeha avy any amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo.
Ny sidina voalohany an'ny AlMasria Universal Airlines dia tonga avy amin'ny masoandro Sharm el-Sheikh mankany amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo.
AlMasria Universal Airlines dia miasa sidina roa isan-kerinandro mankany Hurghada sy Sharm el-Sheikh amin'ny alarobia sy alahady, zoma ary asabotsy.
Amin'izao fotoana izao, ny toerana ejipsiana dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo.
Seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo tongasoa voalohany sidina an'ny AlMasria Universal Airlines, izay tonga avy tany amin'ny masoandro Sharm el-Sheikh.
Ny Carrier dia miasa sidina roa isan-kerinandro mankany Hurghada sy Sharm el-Sheikh amin'ny alarobia sy alahady, zoma ary asabotsy. Fahatongavana ao amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo amin'ny 09:20, fiainga amin'ny 10:20.
Amin'izao fotoana izao, ny toerana ejipsiana dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo mpandeha amin'ny seranan-tsambo. Nandritra ny volana voalohany taorian'ny niverenan'ny sidina nankany amin'ny toeram-pialantsasatr'i Egypte dia nihoatra ny 20 ny fifamoivoizana.
AlMasria Universal Airlines dia kaompaniam-pitaterana an'habakabaka egyptiana manokana. Ny Carrier dia miasa sidina mahazatra sy charter mankany amin'ny toerana 14, manana traikefa 13 taona eo amin'ny sehatry ny serivisy mpandeha.
Domodedovo, ara-dalàna ny "Seranam-piaramanidina iraisampirenena Domodedovo Mikhail Lomonosov" dia seranam-piaramanidina iraisampirenena izay misy ao Domodedovo, Oblast Moskoa, Russia, 42 kilometatra atsimoatsimoatsinanana avy eo afovoan'i Moskoa. Ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo Mikhail Lomonosov dia iray amin'ireo ivon-drivotra lehibe indrindra any Rosia. Tamin'ny taona 2020, nanolotra mpandeha 16.4 tapitrisa ny seranam-piaramanidina. Nisafidy ireo mpikambana ao amin'ny firaisam-piaramanidina malaza manerantany anisan'izany ny Star Alliance sy oneworld Seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo ho an'ny sidina mankany Moskoa.
AlMasria Universal Airlines dia zotram-piaramanidina manokana monina any Egypte. Ny seranam-piaramanidina dia miasa serivisy voatondro sy charter avy any Egypt. 'AlMasria' dia avy amin'ny teny arabo hoe 'egyptiana'.